ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်: ဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေခြင်း (သို့) ဆားချက်ခြင်း
ကောင်းကင်ကို (ရေးပြီး)၊ ရန်အောင် (ရေးပြီး)၊ ကလိုစေထူး (ရေးပြီး)၊ ပီကေ၊ ဟန်သစ်ငြိမ် (ရေးပြီး)၊ ဖိုးမောင်၊ မိုးမောင် (Happy Cloud) (ရေးပြီး)၊ မိုးမြင့်တိမ် (ရေးပြီး)၊ အိပ်မက်ရှင် (ရေးပြီး)၊ ကိုရင်ညိန်း (ရေးပြီး)၊ စပ်မိစပ်ရာ၊ ဆောင်းယွန်းလ (ရေးပြီး)၊ အောင်သာငယ် (ရေးပြီး)၊ မောင်မျိုး (ရေးပြီး)၊ တောင်ပေါ်သား (ရေးပြီး)၊ ဖိုးစိန် (ရေးပြီး)၊ ဖိုးဂျယ် (ရေးပြီး)၊ Heart Museum (ရေးပြီး)၊ Republic (ရေးပြီး)၊ E-journal (ရေးပြီး)၊ Craton(ရေးပြီး)၊ မနော်ဟရီ (ရေးပြီး)၊ မသက်ဇင်၊ အိန္ဒြာ (ရေးပြီး)၊ မမသီရိ (ရေးပြီး)၊ လေးမ၊ ပန်ဒိုရာ (ရေးပြီး)၊ Green Girl (ရေးပြီး)၊ မီယာ (ရေးပြီး)၊ Dream (ရေးပြီး)၊ နန်းညီ (ရေးပြီး)၊
ရှမ်းတောင်တန်းကြီးတွေကို တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး ကျော်ဖြတ်နေသလို ကျနော့်အတွေးတွေလည်း လှိုင်းလုံးကြီးတွေလို ရင်ထဲမှာ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး.. သူဟာ ရန်သူလည်း မဟုတ်၊ အင်အားချင်းလည်း မမျှ၊ အပြစ်လည်း မရှိ.. မေတ္တာခံယူရန်သက်သက် ကိုယ့်အနား ကပ်လာသော တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကို မေတ္တာတရား မရှိသော.. အကြင်နာ ကင်းမဲ့သော.. ရက်စက်တတ်သော.. အသိဉာဏ် မရှိသော ကျနော်.. သူ့ကိုနာကျင်စေခဲ့ပြီ.. ကျနော်မျက်လုံးတွေကို မှိတ်ထားလိုက်တယ်.. သံယောဇဉ်နဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာရဲ့ လေးနက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုလည်း ကျနော်လက်တွေ့ နားလည်သွားပါပြီ.. ကြောင်နက်လေးရဲ့ပုံရိပ်နဲ့ “ညောင်..” ဆိုတဲ့အသံလေး မြင်ယောင်ကြားယောင်လာတယ်.. “နောင်တ” ဆိုတာထက်ပိုတဲ့ အသိတရားတစ်ခုကို တကယ်ရရှိလိုက်ပါပြီ...။
အချိန် 2:33 PM
ဒီလိုပို့စ်မျိုး ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်နီးလောက်ကဘလော့ဂါတွေ ရေးလိုက်ကြသေးတယ် အကြိုက်ဆုံး ပို့စ် ၅ ခုဆိုတာ အဲ့တုန်းက ကျနော်စာ ဖတ်သူပဲရှိသေးတယ် .။ မိနော် အိုင်ဒီယာလေး မဆိုးဘူး ပြန်လှန်လိုက်အုံးမယ် ပို့စ်အဟောင်းတွေပြောတာပါ တစ်ခါခါ ကိုယ်က အရမ်းကို ကြွေပြလိုက်တဲ့ ပို့စ်တွေက ဘယ်သူမှမသိပဲ အောက်ရောက်သွားတာတွေ ကြုံဖူးတယ်း)
ဒါနဲ့ တက်စ်လိုက်တာကလည်း တစ်ရွှေလုံးတစ်မျိုးလုံးပါပဲလားကွယ် လွန်တာပေါ့ ကောင်မရယ် :P
လုပ်နေတာ ဦးနော် တီငယ်နော် မပြောချင်ဘူး ဟွန်း ဒီက မောင်မျိုးလို မိန်းမနဲ့ ခွဲအိပ်မလား စဉ်းစားပါတယ် သူတို့က တက်ဂ်ပြန်ပြီ အင်း ရေးရမှာပေါ့ လာမည် မကြာမီ မျှော် ဟီးးးးး ကလေးလေးကို တက်ဂ် ပါတယ်ဗျို့
blogosphere က လူကုန်ပဲထင်ပါရဲ့...
သို့သော်လည်း သည် Tag ပို့စ်ကတော့ the best tag ever လို့ ပြောရမှာ ဆိုတော့ ကျေးဇူးတင်ပါသည်ပေါ့လေ...း)
နေဦးနော် အဟောင်းတွေ ထဲက အကြိုက်ဆုံးလေး တခုကို ပြန်ရှာလိုက်ဦးမယ်... ကိုရင်နဲ့ မခင်လေးက ကြောင်တွေ အကြောင်း ရေးတာဆိုတော့ ပြန်စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်... ကြောင် အကြောင်း ရေးဖူးသလားလို့...
မဖတ်ရသေးဘူးရှင့် .. အရမ်းဖတ်လို့လည်းကောင်းတယ် .. ခံစားမိပါတယ် ..း)
နင့်ကြောင်မဲကြီးက နင့်လိုဘဲ ရေချိန်ကိုက်နေတဲ့ ပုံနဲ့ ငပျင်းကြီး အဟက် နင်နဲ့အရမ်းတူတယ် ခွီခွီ..
နင့် ကြောင်ကမှ ကုတ်ချောင်းချောင်းနဲ့ ဟင်း ခိုးစားမယ့် ရုပ်..
ငါနဲ့ တွေ့လို့ကတော့ အကစ်ပဲ..
“ညောင်” ကနဲ့ “ဒုန်း” ကနဲ ဖြစ်သွားမယ်.. ဟွန်းးးး
လူတကာကိုတက်စ် လိုက်တဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်တယ်။ မဖတ်ဖူးသေးတဲ့ စာကောင်းကဗျာကောင်းလေးတွေ ဖတ်ခွင့်ရသွားလို့...။
Tag ဖို့ သတိရလို့ ကျေးဇူးပဲနော်
ဒါပေမဲ့ မချိပြုံးလေး နဲ့..
မမ က သူများတွေလို ဘလော့ဂ်ဝါရင့်မဟုတ်သေးဘူးလေ..
ခုလောလောဆယ်တော့.. မောင်လေးမျိုးနဲ့ မသီတာရဲ့ Tag ကြွေးလေး အရင်ဆပ်ပါရစေ
တော်လိုက်တာ ကိုရင်နော်ရယ်.. အဲ မမခင်လေးလည်း တော်တယ် :P
ဒါမျိုးတော့ ချက်ပေးရမှာပေါ့။ ဒီက အလုပ်များနေတာ။ တက်ဂ်ဆိုလို့ စိတ်ညစ်သွားတာ။ ခုတော့ ဆားချက်ခိုင်းတာဖြစ်နေတယ်။ ချက်ဦးမှာ ပင်လယ်ရေ မကုန်မချင်း :P
အသစ်မရေးဖြစ်ချိန်မှာ ဆားချက်ချင်လို့ အဟောင်းတွေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြန်တင်ချင်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ ဟိဟိ
ကောင်းတယ်ဗျာ။ နှစ်ပုဒ်လုံးကောင်းတယ်။ မလေးကြောင်လေးကော ကိုရင့်ကြောင်လေးကော နှစ်ကောင်စလုံးက တကယ်သနားစရာပါ။ အရေးအသားလေးတွေ ကောင်းတာကြောင့် ဖတ်ပြီး တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ တက်ခ်တယ်ဆိုတော့ အဟောင်းတွေပြန်ရှာရဦးမယ်။ သိပ်လည်း များများ စားစားမရှိတော့ ခက်တာပါဘဲ။
ဘယ်ပြောကောင်းမလဲဗျာ... ချက်ချင်းကို ပို့စ်တင်လိုက်ပြီ....
ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဗျို့... ကိုရင်တို့ဆီ အမြဲလာတာ ဒါကြောင့်ပါ။ ဘာပြန် ဆားချက် ရမလဲတောင် မသိသေးဘူး... ထုံ ထုံ ထုံ
ကိုရင်ကြီး သောက်မယ်ဆိုလို့ ၊၊လာခေါ်မယ် ၊၊ :)အိုင်ဒီယာ ကောင်းတယ်၊၊ အမြဲသတိတရရှိလို့ ကျေးဇူးပါ၊၊ တင်ပေးမယ် ဗျာ ၊၊
ညီမခင်လေးရော ကိုရင်နော်ပါ စာရေးသိပ်ကောင်းပါတယ်...ပို့စ်၂ခုစလုံးကို ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာလည်း ကာယကံရှုင်တွေ ခံစားရသလိုမျိုး ခံစားသွားရပါတယ်
အူးနော် သီငယ် ကရေးရေး ရောက် ။ ကြောင်ဖြူနဲ့ကြောင်မဲ fighting play ခိုင်းကြည့်ပါရား ။ ဘူတူနိုင်မရဲရို့  ။ ရှုံးတဲ့တစ်ကောင် လှမ်းပို့လိုက် ။ နော် မြည်လုပ်ပေးမယ် ။ ဟီး ။ ချတာချတာ ။
ဦးနော်. တီငယ်. ကလေး၂ တို့ Tag လိုက်တာ.. တောင်ပေါ်သားကပါ မော(၀်)ရှမ်းမြေ အဖွဲ့သား အားလုံးကိုပါ ပြန်Tag နေလို့ ရေးထားလိုက်တယ်ဗျာ.. ၅ မိနစ် အမြန်.. :D
အားလားလား တော်တော်ကောင်းသဗျို့ ... ရေးလည်း ရေးတတ်လိုက်ကြတာ ... ကြောင်ဖြူလေးနဲ့ နင့်နင့်နဲနဲလေး ခံစားရပြီး သိပ်မကြာဘူး ကြောင်မည်းကြီးဆီလည်းရောက်ရော အူလှိုက်သည်းလှိုက် တခွိခွိရီရတော့တာပဲ ... :D
အဲ ဦးနော် အစကတော့ မခင်လေးကို နောက်သလိုလိုနဲ့ ရီလိုက်ရသေးတယ်နော်။
နောက်ဆုံးကြတော့ သံယောဇဉ်ဆိုတဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ ကြိုးတချောင်းက ဦးနော်ကိုလည်း ရစ်ပတ်သွားစေခဲ့တယ်နော်။